Real Italian uthi
UCanzibe 10, 2013 ngexesha 5:37 pm
Mna lukhangelwe ibhokisi ethi "ukuvumela ukunyusela bookmark us" yemenu kodwa ukubona apho i Khangela uphuculo kwaye enze uphuculo,
Ngaba nceda ucacise
UCanzibe 10, 2013 ngexesha 7:22 pm
Kwi sidemenu Wordpress, Nantsi lapho “ideshbhodi” ilandelwe ngu “uhlaziyo”
UCanzibe 10, 2013 ngexesha 8:26 pm
enkosi, elijongeka iye yasebenza.
UCanzibe 23, 2013 ngexesha 7:08 pm
lo msebenzi ukuba mna usebenzisa iisayithi ezininzi?
Mna ubunqakaze ukuhlaziya kwenye lweziza kodwa akabonisi phezulu admin womnatha yam?
UCanzibe 24, 2013 ngexesha 7:50 mna
Akazange Ukuyivavanya, kufuneka basebenze.
Kwezona, ukhuphele iifayile Java apha uhlaziye ngesandla.
Isilimela 20, 2013 ngexesha 2:21 pm
Hi Bulelani ezininzi isebenza kwi sites multi 🙂
UCanzibe 24, 2013 ngexesha 10:00 mna
Ngoko ke, kwakutheni ukuze uhlaziyo ukuba andizange, ukubulala engcotyeni kwindawo yokuqala?
Andiyifumani. Kutheni kufuneka ukukhuphela Java kwi website lakho ngoku, apho bekumele ukuba asebenze kwindawo yogcino Wordpress?
Coudl uphendula kutheni siyabanyanzela abantu kule?
UCanzibe 26, 2013 ngexesha 12:10 mna
kakuhle, Mna bacebisa ukufunda eli kwaye isithuba yangaphambili, Mna ukunyanzela umntu ukuba enze nantoni na, ukuze ukufakela nantoni na ofuna apho ufuna na.
Isilimela 12, 2013 ngexesha 1:19 mna
Nda landela ngofundiso kodwa andiboni naziphi seflegi unyuka… Nceda! 🙁
Isilimela 12, 2013 ngexesha 1:57 mna
Suyinaka – siyisombululile kuyo. Icacili phandle ukuba kufuneka ukubuyela widget Eyona kwaye khetha iflegi ukhetho EMVA ekuhlaziyeni. Enkosi!
EyeNkanga 22, 2016 ngexesha 11:07 mna
enkosi umntu, yakho waphendula kwandinceda. Ewe, emva ekuhlaziyeni, kufuneka ubuyele Dashboard>FIKILE>widgets, uya kwandula ke ubone iinketho ezininzi iiflegi ukubonisa.
enkosi nothando waseSwitzerland.
Isilimela 27, 2013 ngexesha 11:55 pm
ukubuyela widget Eyona??? kodwa apho?
Ndiye efakiweyo inguqulelo yokugqibela Transposh Iplagi…9.3!
Ndisalusa uncedo yokuzonwabisa… kodwa andikwazi ukufumana apho ukhetho indwe.
Ndingathanda ukusebenzisa Flags endaweni umbhalo og(Igama Ulwimi).
njani ukuseta engcotyeni ongagqibekanga ? Uphi na ilungelo khetho ukuba??
Enkosi kwi advace – luisga
Isilimela 28, 2013 ngexesha 12:08 mna
uhlaziye nje uguqulelo ngokupheleleyo.
Isilimela 28, 2013 ngexesha 2:26 pm
Ndenze oko! Kodwa iphepha yoqwalaselo ye echwetheza kungekho nayiphi na indlela ukukhetha iindwe endaweni “IsiNgesi” – “IsiRashiya” etc (igama kweelwimi).
Uphi na eliqhosha ukukhetha IFLEGI?
Isilimela 28, 2013 ngexesha 10:21 pm
Xa ukhetha le widget ukuze utshintshe isimbo yayo, oku kwi iinketho Java kodwa inkangeleko ezithile widget, kwindawo enye uyakwazi ukutshintsha umxholo walo, etc.
Isilimela 28, 2013 ngexesha 10:50 pm
Enkosi… ngayo ogqibeleleyo!
Andimbonanga selector kwindawo widget.
EyeThupha 13, 2013 ngexesha 10:26 mna
Nje ihlaziyiwe WordPress 3.6 nojongano on translation screen iye yatshintsha ngokupheleleyo. Kodwa eyona nto imbi ukuba andinako kubonakala ukulungisa nawuphi na umbhalo wesicatshulwa ukuba sele iguqulelwe. Ndenjenjalo uhlaziyo Transposh ukuya uguqulelo zakutshanje yaye ndenjenjalo “Vumela yokuphucula bookmark us” yiyiphi ukusebenza oluchanekileyo. Nceda undazise ukuba uyenze ukuze ufumane umsebenzi wokuguqulela screen (kunye iibhokisi eliorenji kwaye eluhlaza unqakraze ku :). Enkosi!
EyeThupha 13, 2013 ngexesha 1:41 pm
guess kuqala kuza kubakho ungquzulwano jQueryUI, Ndicebisa bajongisise console kweJava ukubona ukuba lo mzekelo, sayivalela engananzwayo uguqulelo kwi Ebhekisa phambili.
EyeThupha 14, 2013 ngexesha 12:15 pm
molo, Mna efakiweyo echwetheza kwaye isebenza kakuhle Transposh. Ingxaki ivela xa ndiye kwigalari kwaye nqakraza kwi ifoto ukuze bandise kwaye yiwindow evela skrola phantsi kwaye lonke ixesha andiluniki kumfanekiso olandelayo ihamba ngakumbi, into kunzima kakhulu kwaye inelegant. Phambi kokufaka Transposh imifanekiso luvela kwi window eqhekezayo kodwa zange afudukele ukusuka kwigumbi ukuze sifudukele photo elilandelayo. Ndicinga ukuba iza kuba kubekhona inxenye kunye Lightbox Java WP 2. Indlela ndingayilunmgisa le ngxaki? umbulelo!
EyeThupha 14, 2013 ngexesha 2:13 pm
Ngaba ngokwenene kukunceda ngaphandle kokuba ukubonelela url apho ingxaki zibonakala
EyeThupha 14, 2013 ngexesha 2:31 pm
Oku sele zibonakale
EyeThupha 14, 2013 ngexesha 2:34 pm
molo, Sele ezibonakalayo umxholo url. umbulelo.
EyeThupha 14, 2013 ngexesha 2:12 pm
Andikwazi ukujonga Flag nasemva ekuhlaziyeni Iplagi ukuya uguqulelo Latest. Ngaba Ungandinceda ukuba ndi Lungisa kuyo ..?
EyeThupha 14, 2013 ngexesha 2:14 pm
Qinisekisa ungacwangcisa isimbo olufanelekileyo iwidget kwi imbonakalo / widgets imenu
EyeThupha 14, 2013 ngexesha 2:17 pm
Enibanyulileyo oko.. Phambi Ukuhlaziya mna dint wabona selector widget.. Authors Enkosi… kuhle Iplagi… Ndiyabulela kakhulu
EyeThupha 17, 2013 ngexesha 9:29 mna
website yam ngoku ngesiHebhere (ilungelo ulwimi ekhohlo) kwaye ndingathanda ukongeza IsiNgesi US kwakunye. Ingxaki kukuba emva ndakhuphela iplagi kwi, yonke lenjongo yam ulawulo Wordpress bafuduka ZesiHebhere IsiNgesi, kananjalo website babonakala bububumbi (kwiwebhusayithi lonke ndade elungelelaniswe ngasekhohlo). Ngoko ekuphakuzeleni lukhubazekile iplagi kwi. Mna entsha Wordpress kwaye ngeliphandle, Andinguye uqinisekile oko ndikwenzayo oko Ndandicinga ziziphi iindlela zam? Ndabona amanye tutorials apho kongezelelwa iilwimi bonke ekhohlo abo ekunene, nto yenzeka kubo…
Nceda undincede! 🙂
Enkosi kakhulu kwangaphambili,
EyeThupha 17, 2013 ngexesha 11:09 mna
Yintoni na ndibona kungenxa Transposh kukutshintsha locale ngokwe ulwimi,
Ukulungisa oku, Nceda cwangcisa ngesiHebhere njengolwimi kwendlao kwi Transposh okanye ukukhubaza ifitsha esisezantsi ukuhlanganiswa yezicwangciso,
Khumbula inshorensi kwisikhokelo hitchhiker ngayo.
EyeThupha 19, 2013 ngexesha 2:55 pm
Yini na ukuba uhambe ukusuka WordPress yokugcina? Ingaba ufuna backlink kwi website yakho okanye lo / ilungelo ihlawulwe ozikhethelayo?
EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:59 pm
Wenjenjeya kuba ndithembe yeyokosa,
Ungaze efunekayo, nangoku a kufunwa, uphume vs. uphume-in (okanye ikhowudi ngaphandle)
EyeThupha 20, 2013 ngexesha 10:31 mna
molo kwakhona, Ndabhalela kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo kodwa ndisenawo akukho mpendulo. nceda, nabani na uyazi ukuba mna ukusombulula kubekhona ukuba ivelisa kum Transposh Java kunye WP Lightbox2? Xa uvula ifoto ivula ifestile kwaoko limkile, ukukubona uye emazantsi ephepha. Oku kwenzeka ngalo lonke ixesha ndininika ukuze ubone umfanekiso olandelayo, lonke ixesha skrola ezantsi. Kwenzeka ntoni? Mna entsha kule kwaye ucinge into unokuba impazamo.
Oku kuphela kuyenzeka wayendikhupha Transposh Java ivuliwe, ekukubuyiseni kwam imifanekiso khangela ngokugqibeleleyo.
Omnye umbuzo ndinalo kukuba kwigalari ndingaboni IsiNgesi and Catalan.
Ndathabatha iintsuku eziliqela noku kwaye ndiza uphambene. nceda, umntu unika kwam isandla?
EyoMsintsi 5, 2013 ngexesha 10:44 pm
Ekuqaleni, ukunibulela umsebenzi omkhulu wenza uchake NetscapeComment.
Ndiya kuba Ndinesicelo : i njani yongeza ekuqaleni nganye isithuba isivakalisi ulwimi eliguqulelwe ?
Ndingathanda lumkisa abafundi ukuba itekisi ilandelayo sele iguqulelwe ngokuthi google okanye Bing okanye ….
EyoMsintsi 5, 2013 ngexesha 10:58 pm
Jonga shortcodes (phezu http://trac.transposh.org) kwaye usebenzise ikhowudi not_in, Qiniseka ukuba aguqulele kulwimi olungagqibekanga yenziwe.
EyoMsintsi 6, 2013 ngexesha 10:12 mna
wahou wahou ! Ukuba isebenza kakhulu ngokwenene !
EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 10:45 mna
Ndizamile nokuhlaziywa ukuya olupheleleyo imiyalelo yakho. Kodwa andikwazi ukufumana uhlaziyo ukubonisa konke konke. ubunqakaze “Vumela yokuhlaziyela bookmark us” ndalisindisa, kodwa akukho uhlaziyo showes phezulu. Uyifumene 0.9.3 inguqulelo. Ndazama nokhupho ephuma, iintsuku kunye neeyure balinda. Enqakraziweyo nangaphandle njalo. akukho uhlaziyo. Ndifuna engcotyeni zokusebenza! Kwakhona inguqulelo kuphinda isebenza kubonakala…
EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 11:05 mna
Kukho ingxaki Wordpress 3.7, ibangelwa utshintsho ukuhlaziya url elizulu kwenze inkqubo yohlaziyo,
Kukho izisombululo ezimbini:
1. uguqulelo 0.9.4 iya kukhululwa ukuba wordpress.org eya kwakhona kwenza uhlaziyo
2. ngesandla umxokozelo ifayile ukusuka apha kwaye enze uhlaziyo
EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 11:07 mna
Kulungile. Enkosi! Acinga ukuba ndiyaphambana okanye SMT! 😉
Nayiphi na ingcamango xa?
EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 11:08 mna
Ngokukhawuleza okukhulu (kufuneka enze ezinye iimvavanyo phambi kokuba usikhulule)
EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 11:10 mna
Kulungile. Kuhle. Makubulelwe ke wonke umsebenzi wakho kule! Inceda kakhulu ukwenza kube lula ukuba kupapasha lize abanye baqonde!
EtiMnga 10, 2013 ngexesha 10:06 mna
Mna iyalibazisa ukwenza yokuphucula olu guqulelo kuba ndandicinga bendiya ndinyobulule zonke iiflegi okanye nako ukukhetha iilwimi ezininzi… Yintoni ndiswele ukuqonda ukuba! Njengoko uninzi lweplagi abasebenzisi, Ndiyakholwa ukuba nje ndifuna ukufumana into ivideo isoloko isebenza kwaye. Ndinqwenela congrats transposh umsebenzi omkhulu ekwenzeni ukuba ndiyeke uze ucinge ngendlela ayinikele umva ngenye.
EtiMnga 12, 2013 ngexesha 6:39 pm
nibulela ngenxa yamazwi akho uhlobo